ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် Covid-19 ကို တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ စိုးရိမ်နေရတဲ့အချိန် စက်ရုံအလုပ်သမားတွေ‘အိမ်မှာနေခွင့်’ကို အရေးကြီးကိစ္စအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးဖို့ အလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေက အစိုးရကို တောင်းဆိုခဲ့တာ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ကပ်ရောဂါရင်ဆိုင်ရချိန် အလုပ်သမားတွေ ရပိုင်ခွင့်အတွက် အလုပ်သမား အလုပ်ရှင် အစိုးရ သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးမှုတွေက ပြီးပြတ်တဲ့ရလဒ်ထွက်မလာပါဘူး။ ဒီအကြောင်း ကိုဇော်ထက် သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
နေပြည်တော်မှာ မနေ့က မတ်လ ၂၅ ရက်ကလုပ်တဲ့ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား၊ အစိုးရ သုံးပွင့်ဆိုင်အစည်းအဝေးမှာ စက်ရုံတွေပိတ်သိမ်းပြီး အလုပ်သမားတွေအတွက် အစိုးရ လူမှုဖူလုံရေးရပိုင်ခွင့်တွေရဖို့ အလုပ်သမားရော အလုပ်ရှင်တွေဘက်ကပါ မျှော်လင့်ခဲ့ကြတာပါ။
ထိုင်းနဲ့ မလေးရှားက ပြန်လာသူတွေက စက်ရုံတွေရှိတဲ့ လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာ၊ ပဲခူးတိုင်းလို နေရာမျိုးတွေကို ရောက်သွားပြီး ရောဂါပိုး မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပျံ့နှံ့သွားမှာလည်း စိုးရိမ်ကြောင်း အလုပ်သမား သမဂ္ဂတွေက အစည်းအဝေးမှာ တင်ပြခဲ့ပါတယ်
“ကျမတို့ အဓိက အလုပ်သမားတွေအတွက် stays home leave လို့ပြောတဲ့အခါမှာ မအောင်မြင်ပါဘူး။ ကျန်းမာရေးဌာနက လိုအပ်ရင် ဘယ်ကဏ္ဍတွေကို ဘာလုပ်ပါဆိုတာ ညွှန်ကြားချက်တွေ၊ ကြေညာချက်တွေ ထွက်နေတယ်၊ အဲဒါတွေက မထွက်လာသေးဘဲနဲ့ ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုတာကို အစိုးရက ပြန်ပြောပါတယ်။ စက်ရုံတွေမှာ အလုပ်သမားတွေ တယောက်ကူးသွားပြီ ဆိုတာနဲ့ ကျမတို့ အများကြီး ကူးစက်နှုန်းတွေ အများကြီးမြင့်လာ နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ဧပြီလ ၁ရက်နေ့ ကနေပြီးတော့ ၃၀ရက်နေ့အထိ ပိတ်ပေးဖို့ ကျမတို့ တောင်းဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် CTUM ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်ထုတ်နှင့် စက်မှုလက်မှု အလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ခိုင်ဇာအောင် ပြောသွားတာပါ။တကယ်လို့ စက်ရုံတွေကို ပိတ်ပေးမယ်ဆိုရင် အလုပ်သမားတွေကို ဘယ်လိုပံ့ပိုးကြမလဲ ဆိုတာ လည်း သူတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။
ဒီ သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံပွဲကို အလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား ကျောချင်းကပ်ပြီး အခက်အခဲတွေကို ဆွေးနွေကြဖို့နဲ့ လိုအပ်ရင် အစိုးရက အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်၊ ဟိုတယ်ခရီးနဲ့ အသေးစား စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ အလုပ်သမားတွေအတွက် ကျပ်ငွေ ဘီလီယံ ၁၀၀ ထုတ်ပေးသွားမယ်လို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။ ဒါကို မနေ့က မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားမှာ ဖော်ပြသွားတာပါ။
COVID-19 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားနိုင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက မတ်လ ၁၃ရက်မှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတာပါ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရခွင့်ပြုချက်နဲ့ နိုင်ငံတော်ရံပုံငွေထဲက ကျပ်ငွေ ဘီလီယံ ၅၀၊ လူမှုဖူလုံရေးရံပုံငွေထဲက ဘီလီယံ ၅၀၊ စုစုပေါင်း ဘီလီယံ ၁၀၀ နဲ့ Covid-19 ရန်ပုံငွေထူထောင်ဖို့ ဒီကော်မတီရဲ့ မတ်လ ၁၈ရက် အစည်းအဝေးမှာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်.
“အလုပ်ပိတ်လိုက်တာမျိုးကို ဝန်ကြီးဌာနက မလုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ အကယ်၍များ စက်ရုံမှာ ရောဂါပိုးရှိတဲ့သူတယောက်တွေ့လို့ အိမ်မှာနေပြီး စက်ရုံအလုပ်သမားတွေကို စောင့်ကြည့်ခိုင်းလိုက်ပြီဆိုရင် လုပ်သားတွေကို လူမှုဖူလုံကြေးကနေ ကျန်းမာရေးခွင့်ထဲကနေ ၆၀% ပေးရမယ်ဆိုတာ ဥပဒေအရ ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အဲဒါကို အစိုးရက ပံ့ပိုးမယ်ဆိုတာကို သိရပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၄၀% က ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာ ကျမတို့ သဘောတူညီချက် မရှိပါဘူး။”
စက်ရုံတချို့က အလုပ်သမားတွေဟာ ရောဂါကူးစက်မှာ စိုးရိမ်လို့ နေရပ်ပြန်နေကြပါတယ်။ CMPအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေကနေ အစိုးရက လူမှုဖူလုံးကြေး ကျပ်ငွေဘီလီယံချီရရှိနေတာကြောင့် တကယ်လို့ စက်ရုံတွေကို ယာယီပိတ်မယ်ဆိုရင် အလုပ်သမားတွေနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် အစိုးရက အပြည့်အဝအာမခံတယ်ဆိုတာ ကြေညာသင့်ကြောင်း လှိုင်သာယာ ရွှေလင်ပန်း စက်မှုဇုံ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသောင်းက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“လုပ်ငန်းရှင်က ဘာတာဝန်ယူပေးရမလဲ၊ ခင်ဗျားတို့ တတ်နိုင်တာပဲ လုပ်ပေးပါ ဆိုတာမျိုးကြီးကတော့ တမျိုးကြီးများ ဖြစ်နေမလားလို့ပါ။ တလကို လုပ်သားတွေရဲ့ လူမှုဖူလုံကြေး ဘီလီယံ ၈၀၀၊ ၉၀၀ လောက်ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ။ ဒါတွေ ဒီအချိန်မှာ သုံးဖို့ မသင့်ဘူးလား။ ဒီပိုက်ဆံတွေကို နိုင်ငံတော် ဘဏ်တွေကတောင် လက်မခံနိုင်ဘူး၊ အတိုးပေးရလို့။ အခုနိုင်ငံတော်အစိုးရ ဝန်ထမ်းတွေလျှော့နေပြီ၊ ကျနော်တို့ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ မသိဘူး။ အခုကလေးတွေက အကုန်ပြန်ချင်နေတယ်၊ စက်ရုံမှာ။ ပြတ်ပြတ်သားသားတခု ကြေညာပေးဖို့ လိုပြီလေ။ ဖြစ်လာရင် ကျနော်တို့ ထိန်းမနိုင်ဘူးဗျ။”
ပြည်တွင်း စက်မှုဇုံကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းမှာ CMP လက်ခစား အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေက ဦးဆောင်နေပြီး အလုပ်သမား ၅သိန်းလောက်ကို အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။
COVID-19 ကွောငျ့ မွနျမာစကျရုံတှေ ပိတျပေးရေး ဆှေးနှေးမှုတှေ မအောငျမွငျ
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ Covid-19 ကို တကမ်ဘာလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ စိုးရိမျနရေတဲ့အခြိနျ စကျရုံအလုပျသမားတှေ‘အိမျမှာနခှေငျ့’ကို အရေးကွီးကိစ်စအဖွဈ သတျမှတျပေးဖို့ အလုပျသမားသမဂ်ဂတှကေ အစိုးရကို တောငျးဆိုခဲ့တာ မအောငျမွငျခဲ့ပါဘူး။ ကပျရောဂါရငျဆိုငျရခြိနျ အလုပျသမားတှေ ရပိုငျခှငျ့အတှကျ အလုပျသမား အလုပျရှငျ အစိုးရ သုံးပှငျ့ဆိုငျ ဆှေးနှေးမှုတှကေ ပွီးပွတျတဲ့ရလဒျထှကျမလာပါဘူး။ ဒီအကွောငျး ကိုဇျောထကျ သတငျးပေးပို့ထားပါတယျ။
နပွေညျတျောမှာ မနကေ့ မတျလ ၂၅ ရကျကလုပျတဲ့ အလုပျရှငျ၊ အလုပျသမား၊ အစိုးရ သုံးပှငျ့ဆိုငျအစညျးအဝေးမှာ စကျရုံတှပေိတျသိမျးပွီး အလုပျသမားတှအေတှကျ အစိုးရ လူမှုဖူလုံရေးရပိုငျခှငျ့တှရေဖို့ အလုပျသမားရော အလုပျရှငျတှဘေကျကပါ မြှျောလငျ့ခဲ့ကွတာပါ။
ထိုငျးနဲ့ မလေးရှားက ပွနျလာသူတှကေ စကျရုံတှရှေိတဲ့ လှိုငျသာယာ၊ ရှပွေညျသာ၊ ပဲခူးတိုငျးလို နရောမြိုးတှကေို ရောကျသှားပွီး ရောဂါပိုး မွနျမွနျဆနျဆနျ ပြံ့နှံ့သှားမှာလညျး စိုးရိမျကွောငျး အလုပျသမား သမဂ်ဂတှကေ အစညျးအဝေးမှာ တငျပွခဲ့ပါတယျ
“ကမြတို့ အဓိက အလုပျသမားတှအေတှကျ stays home leave လို့ပွောတဲ့အခါမှာ မအောငျမွငျပါဘူး။ ကနျြးမာရေးဌာနက လိုအပျရငျ ဘယျကဏ်ဍတှကေို ဘာလုပျပါဆိုတာ ညှနျကွားခကျြတှေ၊ ကွညောခကျြတှေ ထှကျနတေယျ၊ အဲဒါတှကေ မထှကျလာသေးဘဲနဲ့ ဒီလိုမြိုးလုပျဖို့ အစီအစဉျမရှိဘူးဆိုတာကို အစိုးရက ပွနျပွောပါတယျ။ စကျရုံတှမှော အလုပျသမားတှေ တယောကျကူးသှားပွီ ဆိုတာနဲ့ ကမြတို့ အမြားကွီး ကူးစကျနှုနျးတှေ အမြားကွီးမွငျ့လာ နိုငျတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ ကွိုတငျကာကှယျတဲ့အနနေဲ့ ဧပွီလ ၁ရကျနေ့ ကနပွေီးတော့ ၃၀ရကျနအေ့ထိ ပိတျပေးဖို့ ကမြတို့ တောငျးဆိုတာ ဖွဈပါတယျ။”
မွနျမာနိုငျငံလုံးဆိုငျရာ အလုပျသမားသမဂ်ဂမြားအဖှဲ့ခြုပျ CTUM ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျနဲ့ မွနျမာနိုငျငံ ကုနျထုတျနှငျ့ စကျမှုလကျမှု အလုပျသမားမြားအဖှဲ့ခြုပျ ဥက်ကဋ်ဌလညျးဖွဈတဲ့ ဒျေါခိုငျဇာအောငျ ပွောသှားတာပါ။တကယျလို့ စကျရုံတှကေို ပိတျပေးမယျဆိုရငျ အလုပျသမားတှကေို ဘယျလိုပံ့ပိုးကွမလဲ ဆိုတာ လညျး သူတို့ဆှေးနှေးခဲ့ကွတာပါ။
ဒီ သုံးပှငျ့ဆိုငျတှဆေုံ့ပှဲကို အလုပျသမားလူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ ပွညျသူ့အငျအားဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးသိနျးဆှေ တကျရောကျခဲ့ပါတယျ။
အလုပျရှငျ အလုပျသမား ကြောခငျြးကပျပွီး အခကျအခဲတှကေို ဆှေးနှကွေဖို့နဲ့ လိုအပျရငျ အစိုးရက အထညျခြုပျလုပျငနျးတှအေပါအဝငျ၊ ဟိုတယျခရီးနဲ့ အသေးစား စကျမှုလကျမှု လုပျငနျးရှငျတှနေဲ့ အလုပျသမားတှအေတှကျ ကပျြငှေ ဘီလီယံ ၁၀၀ ထုတျပေးသှားမယျလို့ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးက ပွောပါတယျ။ ဒါကို မနကေ့ မွနျမာ့အသံနှငျ့ ရုပျမွငျသံကွားမှာ ဖျောပွသှားတာပါ။
COVID-19 ကွောငျ့ဖွဈပျေါလာနိုငျတဲ့ စီးပှားရေးသကျရောကျမှုမြားအပျေါ ကုစားနိုငျရေး လုပျငနျးကျောမတီကို နိုငျငံတျောသမ်မတရုံးက မတျလ ၁၃ရကျမှာ ဖှဲ့စညျးခဲ့ပါတာပါ၊ ပွညျထောငျစုအစိုးရခှငျ့ပွုခကျြနဲ့ နိုငျငံတျောရံပုံငှထေဲက ကပျြငှေ ဘီလီယံ ၅၀၊ လူမှုဖူလုံရေးရံပုံငှထေဲက ဘီလီယံ ၅၀၊ စုစုပေါငျး ဘီလီယံ ၁၀၀ နဲ့ Covid-19 ရနျပုံငှထေူထောငျဖို့ ဒီကျောမတီရဲ့ မတျလ ၁၈ရကျ အစညျးအဝေးမှာ ဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ.
“အလုပျပိတျလိုကျတာမြိုးကို ဝနျကွီးဌာနက မလုပျပေးနိုငျပမေဲ့ အကယျ၍မြား စကျရုံမှာ ရောဂါပိုးရှိတဲ့သူတယောကျတှလေို့ အိမျမှာနပွေီး စကျရုံအလုပျသမားတှကေို စောငျ့ကွညျ့ခိုငျးလိုကျပွီဆိုရငျ လုပျသားတှကေို လူမှုဖူလုံကွေးကနေ ကနျြးမာရေးခှငျ့ထဲကနေ ၆၀% ပေးရမယျဆိုတာ ဥပဒအေရ ရှိတဲ့အတှကျကွောငျ့မို့လို့ အဲဒါကို အစိုးရက ပံ့ပိုးမယျဆိုတာကို သိရပါတယျ။ ကနျြတဲ့ ၄၀% က ဘယျလိုဖွဈမလဲဆိုတာ ကမြတို့ သဘောတူညီခကျြ မရှိပါဘူး။”
စကျရုံတခြို့က အလုပျသမားတှဟော ရောဂါကူးစကျမှာ စိုးရိမျလို့ နရေပျပွနျနကွေပါတယျ။ CMPအထညျခြုပျလုပျငနျးတှကေနေ အစိုးရက လူမှုဖူလုံးကွေး ကပျြငှဘေီလီယံခြီရရှိနတောကွောငျ့ တကယျလို့ စကျရုံတှကေို ယာယီပိတျမယျဆိုရငျ အလုပျသမားတှနေဲ့ လုပျငနျးရှငျတှအေတှကျ အစိုးရက အပွညျ့အဝအာမခံတယျဆိုတာ ကွညောသငျ့ကွောငျး လှိုငျသာယာ ရှလေငျပနျး စကျမှုဇုံ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးအေးသောငျးက ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
“လုပျငနျးရှငျက ဘာတာဝနျယူပေးရမလဲ၊ ခငျဗြားတို့ တတျနိုငျတာပဲ လုပျပေးပါ ဆိုတာမြိုးကွီးကတော့ တမြိုးကွီးမြား ဖွဈနမေလားလို့ပါ။ တလကို လုပျသားတှရေဲ့ လူမှုဖူလုံကွေး ဘီလီယံ ၈၀၀၊ ၉၀၀ လောကျရှိတဲ့ ပိုကျဆံတှေ ဘယျရောကျကုနျပွီလဲ။ ဒါတှေ ဒီအခြိနျမှာ သုံးဖို့ မသငျ့ဘူးလား။ ဒီပိုကျဆံတှကေို နိုငျငံတျော ဘဏျတှကေတောငျ လကျမခံနိုငျဘူး၊ အတိုးပေးရလို့။ အခုနိုငျငံတျောအစိုးရ ဝနျထမျးတှလြှေော့နပွေီ၊ ကနြျောတို့ ဘာဆကျလုပျရမလဲ မသိဘူး။ အခုကလေးတှကေ အကုနျပွနျခငျြနတေယျ၊ စကျရုံမှာ။ ပွတျပွတျသားသားတခု ကွညောပေးဖို့ လိုပွီလေ။ ဖွဈလာရငျ ကနြျောတို့ ထိနျးမနိုငျဘူးဗြ။”
ပွညျတှငျး စကျမှုဇုံကုနျထုတျလုပျငနျးမှာ CMP လကျခစား အထညျခြုပျလုပျငနျးတှကေ ဦးဆောငျနပွေီး အလုပျသမား ၅သိနျးလောကျကို အလုပျအကိုငျ ဖနျတီးပေးထားပါတယျ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကူးစက်သူ ၅ ဦး ရှိသွားပြီ
COVID-19 အတွက် တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာ ဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲ
COVID-19 အရေး လိုအပ်တဲ့ဝတ်စုံနဲ့ ကိရိယာတွေ လူထု ပါဝင်လှူဒါန်း